ओमिक्रोन : संक्रमित भएको थाहा कसरी पाउने, खोपको प्रभावकारिता कति? – Health Post Nepal
२०७८ पुष २२ गते ९:३८
नेपालसहित विश्वभर अहिले कोरोनाको नयाँ लहरको चर्चा भइरहेको छ। हरेक दिन नयाँ केसहरूको संख्या धेरै छिटो बढिरहेको छ। हालको लहरका लागि जिम्मेवार भनिएको कोरोना भाइरसको भेरियन्टको नाम ‘ओमिक्रोन’ राखिएको छ।
विज्ञहरू भन्छन् यो डेल्टा जति खतरनाक त छैन तर, निकै संक्रामक भने छ। संक्रमणका कारण बिरामीहरु त्यती गम्भीर भएका छैनन्। तर, ओमिक्रोनबाट हुने संक्रमण चाँडै फैलिन्छ। यस कारणले गर्दा मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी पालना गर्न विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन्।
ओमिक्रोनका लक्षण के हुन्?
ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएका अधिकांश मानिसहरूलाई रुघाखोकी लागेको महसुस हुन्छ। घाँटी दुख्ने, नाक बग्ने र टाउको दुख्ने हुन्छ। कोरोनाको अघिल्लो संस्करणबाट संक्रमित हुँदा प्रायः मानिसहरूले गन्ध वा स्वाद गुमाउने वा खोकी र उच्च ज्वरो आउने गरेको हुन्थ्यो। तर, आधिकारिक रूपमा भने यी तीन लक्षणलाई नै कोरोनाको लक्षण मानिन्छ।
ओमिक्रोन खतरनाक भेरियन्ट डेल्टाभन्दा धेरै छिटो फैलिन्छ। तर, यसका बाबजुद पनि ओमिक्रोन त्यति गम्भीर नभएको र संक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना कम रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। यसको मुख्य कारण यो हो कि, धेरै मानिसहरूले खोप लगाएका छन् वा तिनीहरू पहिले संक्रमित भइसकेका छन् जसले गर्दा उनीहरूको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसकेको छ।
ओमिक्रोन पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको थियो, तर अब त्यहाँ यसको संक्रमणको उच्च बिन्दु घटिसकेको छ। बेलायतमा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दुमा छ। विज्ञहरू भन्छन्, यदि ओमिक्रोन बढी मात्रामा वृद्ध व्यक्तिहरू वा शारीरिक अवस्था कमजोर भएका मानिसमा सर्न थाल्यो भने यसले जटिल अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ।
ओमिक्रोन परीक्षण कसरी हुन्छ?
यसको पुष्टि आरटी-पिसिआर परीक्षणबाट मात्र गर्न सकिन्छ जसका लागि नमूना प्रयोगशालामा पठाइन्छ। त्यहाँ यो संक्रमण ओमिक्रोना हो वा डेल्टा वा अन्य केहि हो भन्ने पत्ता लाग्छ। यदि कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर मात्र थाहा पाउनु छ भने र्‍यापिड टेस्ट गरे पुग्छ। तर परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आए पनि त्यो ओमिक्रोन हो कि डेल्टा हो वा अरु केहि हो भनेर थाहा हुन सक्दैन।
परीक्षणको नतिजा कति चाँडो प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो त्यस क्षेत्रमा कतिवटा परीक्षण प्रयोगशालाहरूमा ओमिक्रोन परीक्षण प्रविधि उपलब्ध छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, बेलायत जस्तो देशमा आधाभन्दा कम प्रयोगशालामा मात्र यो प्रविधि छ। ओमिक्रोन पुष्टि गर्न जीनोम सिक्वेन्सिङ अर्थात जेनेटिक एनालाइसिस आवश्यक छ, जसमा चारदेखि पाँच दिन लाग्नसक्छ।
ओमिक्रोन अन्य भेरियन्टभन्दा कसरी भिन्न?
भाइरसहरू निरन्तर रूपमा उत्परिवर्तित हुन्छन्। अर्थात्, तिनीहरू लगातार रूप परिवर्तन गर्छन्। जसले नयाँ संस्करण आउँछ। यसैलाई एक प्रकारले भेरियन्ट भनिन्छ। यी मध्ये केही भेरियन्टहरू बढी खतरनाक हुन सक्छन् वा धेरै छिटो फैलिने हुनसक्छन्। वैज्ञानिकहरूको शब्दावलीमा तिनीहरूलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्न (VoC) अर्थात् चिन्ताको विषय मानिन्छ। ओमिक्रोन पनि एक भेरियन्ट अफ कन्सर्न हो। किनकि यसमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका परिवर्तनहरू भएका छन्।
यी धेरैजसो परिवर्तनहरू भाइरसका ती भागहरूमा भएका छन् जहाँ उपलब्ध खोपहरूले आक्रमण गर्छन्। भाइरसको यो भागलाई स्पाइक प्रोटिन भनिन्छ।
खोपको असर कति?
ओमिक्रोन भेरियन्टको स्पाइक प्रोटिनमा भएको परिवर्तनले सुरुमा यस्तो चिन्ता थप्यो कि हाल उपलब्ध खोपहरु यो भेरियन्टमा प्रभावहीन हुनेछन्। तर, बेलायतको हेल्थ प्रोटेक्शन एजेन्सीले यसबारे आफ्नो अनुसन्धानमा बुस्टर भ्याक्सिनको थप डोज लिने हो भने ८८ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्ने र अस्पताल पुग्ने सम्भावनालाई कम बनाउने देखायो। यो भ्याक्सिनको अघिल्लो भेरियन्टसँग लड्ने क्षमताभन्दा थोरै हो।
बेलायतमा भएको अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि, ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्तिहरूमा डेल्टा भेरियन्टको तुलनामा अस्पताल पुग्ने जोखिम झन्डै आधा हुन्छ।